बिस्केट जात्राको लिङ्गो भाँचियो, एकको मृत्यु, पाँच घाइते. – Sabaikoaawaj.com
बिस्केट जात्राको लिङ्गो भाँचियो, एकको मृत्यु, पाँच घाइते.
शुक्रबार, बैशाख १, २०७४ 9:22:58 AM	मा प्रकाशित
भक्तपुर, १ बैशाख / भक्तपुरमा मनाइने बिस्केट जात्राको लिङ्गो उठाउने क्रममा लिङ्गो भाचिँदा एक जनाको ज्यान गएको छ । पाँच जना घाइते भएका छन् ।
ज्यान जानेमा अन्दाजी ३४ वर्षका एक व्यक्ति रहेको र पहिचान हुन नसकेको महानगरीय प्रहरी परिषर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता कृष्ण प्रसाईले बताउनुभयो । लिङ्गो भाचिएर घाइते भए लगत्तै भक्तपुर अस्पताल ल्याइए पनि अस्पताल ल्याउनु अघि नै ज्यान गएको थियो ।
घाइते हुनेमा सूर्यविनायक ६ बस्ने वर्ष २२ का सुमन तज, च्यामासिंह लिवाली बस्ने वर्ष ५० का रामकृष्ण दुवाल, भनपा ११ बस्ने वर्ष ४८ का बालकृष्ण लिला, कमलविनायक बस्ने वर्ष ५३ का कृष्णभक्त दुवाल र नासमनाका वर्ष २८ का सुरेन्द्र कैती रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, बैशाख १, २०७४ 9:22:58 AM